5G sy ny fifindran'ny olombelona: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 Febroary 2019	• 35 Comments
Fandrosoana ara-teknolojika ireo amin'izao fotoana izao ka mandroso haingana fa maro ny olona tsy mahalala mihitsy ny zavatra azo atao. Ny tanora, angamba ny sasany fandaharana TV sy mijery amin'ny Discovery Channel na izay manaraka ny fiofanana ara-teknika dia azo nilaza tsara kokoa, fa raha manontany ny mpandalo eo ho eo manontany raha fantany izay nanotechnology Ohatra, ratsy anao hahazo valiny. Fa manaraka ny fironana eo amin'ny fivoarana teknolojika, dia manome sary tsara ny fivoarana ara-politika izay namelabelatra ary ianao tsy mahazo sary mazava ny antony lalàny sy ny didiny no nampidirina, fa nahoana no be dia be saika teknolojia sasany.
5G dia ohatra tsara amin'izany. Voaro ny fandaniana mba hamenoana izao tontolo izao amin'ny mpizara 5G. Ary rehefa milaza aminao aho fa ity dia mandray anjara amin'ny rafitra fanandevozana nomerika farany, dia hitanao ihany koa fa efa tapitra ny fotoana fijerena azy. Fotoana izao ho an'ny revolisiona, araka ny voafaritra ao ny lahatsoratra teo aloha.
Raha fantatrao ny momba ny teknolojian'ny nano dia azonao atao ihany koa ny mahafantatra fa azo atao indray ny manangana indray ny atoma na molekiola. Noho izany dia afaka namorona ADN nandritra ny fotoana fohy izahay. Tsy vitan'ny hoe, afaka manamboatra fitaovana vaovao isika. Mandra-pahatongan'izany dia azo atao ny mamerina ADN. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fomba mahazatra CRISPR-CAS, izay azon'ny vatan'olombelona atao misimisy kokoa raha mamaky azy io amin'ny programa rindrambaiko Microsoft Word. Amin'ny alalan'ity dika metodaly ity dia azo tsidihana sy ampifanitsiana ny ADN amin'ny vatan'olombelona. Karazana finday 'find & replace'; toy ny amin'ny rindrambaiko ao amin'ny solosainao.
Eto amin'ity tranokala ity dia matetika no dinihina ny antony tokony hametrahana ny lalàna izay manome antoka fa ny governemanta tsirairay dia manana ADN ao anaty tahiry. Amin'ny lafiny iray, tsy maintsy misy lalàna manome antoka fa tokony hanaiky ny vaksiny ny tsirairay. Mazava ho azy fa vita amin'ny alàlan'ny làlana izany Olana, fihetsika, vahaolana, izay ny faobe dia nofetafetainy ara-tsaina mba hanaiky lalàna ity, tena inflated namorona na olana, ohatra amin'ny alalan'ny asa ara-tsaina (PSYOP, ny Baiboly: Nikarakara toe-javatra na heloka bevava - respectively- mipoitra, Nikarakara otrik'aretina). Raha ianareo eo amin 'ny olona tahaka an'i Petera R. de Vries manan- be heloka bevava namoaka tranga hahafantatra hamaha amin'ny ADN toy ny ody teny, tsy maintsy hitondra ny vahoaka ho fanekena ho an'ny firenena fomba ADN banky angona. Raha afaka mampiseho ny fomba ratsy mandeha haingana be dia lalàna ho an'ny vaksiny amin'ny otrik'aretina maintsy mipoitra, mba ho azo antoka fa mila ny vahoakanao sy mampahatahotra ny haino aman-jery lehibe amin'ny alalan'ny hetsika (toy ny valan'aretina Ebola PSYOP), ianao koa tsy maintsy Mety ho akaiky lafiny fandrafetana.
Ny zavatra roa dia ilaina amin'ny zavatra tena ilàna azy, raha te-hanana hery tsy refesi-mandidy amin'ny vahoaka ianao ho toy ny fanjakana. Azonao atao ny manova olona avy amin'ny 'cloud'. Ny hany zavatra ilainao eto dia ny manaparitaka ny virosy mitondra (ilaina amin'ny fampiharana ny metaly CRISPR-CAS) ho an'ny tsirairay amin'ny alàlan'ny vaksinina. (Vakio eto ambany ny lahatsary)
Ny fampisehoana TED voalaza etsy ambony dia mazava ho azy fa ny lafy tsaran'ny fahombiazan'ireny fandrosoana ireny. Na izany aza dia manondro anao ny loza mananontanona izay ao anatin'izany. Raha te ho afaka hanatanteraka ireo voalaza etsy ambony ianao, dia mila tambajotra matevina sy tamba-jotra misy bandwidth 'ampy' mba hahafahanao mamantatra ny fandefasana ny code.
Saingy misy zavatra hafa. Efa niresaka matetika aho fa nanangana orinasa antsoina hoe Neuralink i Elon Musk. Tsy dia maheno izany loatra izahay ao amin'ny haino aman-jery, satria ny fifantohana dia indrindra amin'ny Space X, Tesla ary ny Company Boring, fa ny zava-dehibe indrindra ny Neuralink. Raha ny marina, ny orinasa rehetra dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fanovàna ny olombelona, ​​satria ny Space X dia afaka mandray anjara amin'ny toerana feno amin'ny satelita 5G, mandray anjara amin'ny Tesla ny fampiroboroboana ny fahaiza-manavaka ary ny Neuralink dia afaka mitondra atidoha amin'ny aterineto. Ao anatin'izany toe-draharaha izany, ny orinasa Boring dia ambany indrindra mahakasika azy, fa indrindra indrindra indrindra ny mifanaraka amin'ny endriky ny faniriana hifaneraserana tsy tapaka. Raha tany an-tsena rehefa afaka taona vitsivitsy ny teknolojia ho an'ny atidoha avy amin'ny aterineto, misy izao tontolo izao ny vaovao mety misokatra, nanome ny 5G Network vonona. Raha fantatrao izay tapaky ny atidoha-miasa ny zava-mitranga sasany ary afaka ohatra mivantana hamahana ny foiben'ny dimy saina rehetra, dia afaka nahita, nandre, fofona, mikasika sy hanandrana projecting mivantana any amin'ny atidoha. Raha fantatrao ny toerana misy ny fahatsiarovan-tena, dia afaka mandefa fahatsiarovana ny atidohan'olon-kafa ianao na mizara ny eritreritra.
Noho izany raha toa ka afaka manantona ny atidoha ao amin'ny aterineto ary manana tamba-jotra 5G manerantany ianao dia ny olona tsirairay dia ampahany amin'ny 'aterineto amin'ny zavatra'. Ankehitriny, azahoao ny antony nahatonga ny orinasa nametrahan'i Google an-jatony tapitrisa, Magic dingana lehibe, te-hanome ny tontolo manontolo miaraka amin'ny sehatra tena izy vaovaon'ny virtoaly? Izany dia satria tsy ho ela dia tsy mila mametaka solomaso VR ianao mba hijerena ny tena zava-misy marina momba ny tontolo tena izy (Augmented Reality). Ity zava-misy virtoaly ity dia azo jerena mivantana ao amin'ny atidohanao (ao amin'ny foibem-panahin'ny atidoha). Anisan'izany ny fikitihana, ny tsiro sy ny fofona. Ny tontolo tena izy dia hiray tsikelikely amin'ny virtoaly. Ny orinasan'ny teknolojia lehibe eto amin'izao tontolo izao dia mampiasa izany.
Ankehitriny ianao dia afaka mientanentana amin'ny hevitra toy izany. Indrindra raha mpilalao gamer ianao ary tsapanao fa tsy ho ela ianao dia afaka mandehandeha amin'ny tontolo tena izy, saingy avy eo ny lalao dia napetraka fotsiny amin'ny tontolo tena izy. Afaka mizara ny traikefa amin'ny hoavy tsy ho ela isika amin'ny alalan'ny Snapchat sy Instagram, fa avy eo mipoitra mivantana ao amin'ny atidoha ary miaraka amin'ireo traikefa misaina rehetra. Ny indostrian'ny pôrnônaly dia hampiroborobo ny fanentanana an-tserasera. ny tsetsatsetsa Hitantsika tao amin'ny sarimihetsika Demolition Movie avy ao amin'ny 1993. Ny mpianatra dia afaka mahazo ny fahalalana rehetra ilainy avy amin'ny rahona. Ny fianarana dia toy izany dia tsy mahomby. Ho tonga mpanamboatra zavakanto virtoaly bebe kokoa isika. Tsy miresaka momba ny SciFi izahay ary zavatra izay haharitra am-polo taona. Miresaka momba ireo fivoarana izay mitranga amin'izao fotoana izao isika. Izany no mahatonga ny tambajotra 5G ho efa manan-danja tokoa.
Mandritra izany fotoana izany, ny karazana teknolojia tsy ho ela dia ampiharina amin'ny olombelona dia efa hita eo amin'ny tontolon'ny robotics. Isika dia eo an-dalam-pifangaroan'ny olona sy ny milina ary ny zavatra rehetra ilaina dia ny tambajotra izay manome ny banga sy haingana dia haingana. Izany no mahatonga ny orinasa Oneweb (www.oneweb.world) efa lasa feno ireo satelita 5G ny habaka. Eo an-toerana ny orinasa fanjakana sy Telecom dia tena mora Raharaha tsara ihany no tsara, fa misy maika satria rafitra fanandevozana ny farany dia tokony ho nametraka haingana araka izay azo atao. Elon Musk dia efa 2015 drafitra mba hanantonana ny toerana tamin'ny alalan'ny zanabolana 5G SpaceX feno tamin'ny Janoary 2019 koa izahay nahita ny hafatra izy pumping toerana amin'ny alalan'ny SpaceX full miaraka amin'ireo satelita 5G an'arivony. Ahoana no ahafahan'ilay lehilahy nampitandrina an'izao tontolo izao momba ny loza ateraky ny AI (famoronana kanto) nametraka ny fototra ara-teknolojia teo amin'ny lafiny rehetra mba handraisan'ny AI ny olombelona? Raha tsy misy ny fifandimbiasana marina sy tsy misy ny fifandraisana atidoha dia tsy mampanahy ny AI. Ny Musk mazava tsara dia manana tarehimarika amin'ny masony 2.
Ho hitantsika tsy ho ela fa mikarakara asa bebe kokoa ny olombelona. Toy ny robots amin'ny ATLAS (tsindrio ny rohy) miaraka anatomia anatomia, miaraka amin'ny teknôlôjika avy amin'ny robot service (izay manana fahatsapana fahita eo amin'ny rantsany rehetra) dia afaka mameno ny fitsaboana sy ny hopitaly. Kanefa afaka manana ny asan'ny mpitandro filaminana sy ny miaramila ihany koa ianao. Ho avy tsy ho ela ny nanotechnologika hahitantsika robots miaraka amin'ny fibra miaina amin'ny alalan'ny nanotechnology. (Vakio eto ambany ny lahatsary)
Ny zava-drehetra dia ny hoe ny sisin-tany eo amin'ny olona sy ny milina dia ho lasa lavitra kokoa. Izany no orinasa Cloud Saina Efa nandinika ny fomba hanomezana robots amin'ny atidoha ao anaty rahona. Raha ny marina, azonao atao ny mametraka AI ao anaty processeur amin'ny lohan'ny robot, fa io fitaovana io dia manome venty fanampiny ary mety ho simba ihany koa. Tsy tsara kokoa ve raha manana miaramila marobe robot ianao izay manana ny atidohany ao anaty rahona? Ilainao ny tranonkala 5G noho izany, satria io tambajotra io dia manome tolotra malalaka mba hanolotra io asa io. Ny atidoha ao anaty rahona dia mety ho lehibe kokoa noho ny atidoha ao anaty karandohany. Azonao atao ny mampifandray ireo ordinatera ho toy ny robot ary mba ahafahanao manatsara kokoa azy ireo. Mazava ho azy fa ilaina ihany koa fa efa nosedraina tamin'ny robot ity teknolojia ity raha tsy ho ela ny atidoha dia ao anaty rahona. Noho izany dia dingana kely fotsiny ny hametrahana ny atidohan'olombelona amin'ny teknolojia iray ihany.
Mandritra izany fotoana izany, ny fampivelarana ny AI (kanto an-tsarimihetsika) dia mihabetsaka sy haingana kokoa. Efa fantatsika fa ny AI dia afaka manao ny fankasitrahana amin'ny endrika amin'ny fanangonana rakitra goavana avy amin'ny cameras rehetra. Ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra an'i Shina amin'ity sary ity; ny firenena izay ampiharina mivantana. Na izany aza dia lasa mahaliana kokoa raha fantatrao ny fivoarana farany. Ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversite Carnegie Mellon dia namolavola fomba iray hahatonga ny AI hahalala ny vatana. Vakio ilay lahatsoratra manontolo etsy ambany ity rohy ity. Ny soso-kevitra iray avy amin'ny lahatsoratra dia manome ny hevitr'ilay fampandrosoana:
Ankehitriny ny rafitra dia manana an'io angona io miaraka aminy fakantsary sy solosaina iray. Tsy ilainy intsony ny tranom-bitsika fakan-tsary mba hamaritana ny vatana, ka mahatonga ny teknolojia ho azo ampiasaina sy hahitana azy. Efa navotsotra ireo mpikaroka ny code ho an'ny vahoaka mba hamporisika ny fanandramana.
Milaza izy ireo fa azo ampiharina amin'ny karazana fifandraisana misy eo amin'ny olombelona sy ny milina ny teknolojia. Afaka mitana andraikitra goavana eo amin'ny zava-niainan'ny VR izy, mamela ny fahitana mafimafy kokoa ny hetsika ara-batana amin'ny mpampiasa tsy misy fitaovana an-tserasera, toy ny mpamantatra mibaribary na fonon-tanana.
Afaka manamora ny fifandraisana amin'ny natiora amin'ny robot ao an-trano izy io. Azonao atao ny milaza ny robot anao mba "haka izany", ary azonao atao ny mahatakatra ny zavatra asehonao. Amin'ny alalan'ny fahitana sy ny fandikana ny fihetsikao ara-batana, ny robot dia afaka mianatra mamaky fihetsehampo amin'ny fanarahana ny fitenin'ny vatana. Noho izany rehefa mitomany mangina ianao eo amin'ny tananao satria mila manao ny asanao ny robot, dia mety ho vatosoa izany.
Ny famintinana fohy momba ny toetry ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia tokony hahatonga anao hahafantatra tsara ny zava-mitranga sy ny fomba haingana ao anaty lalana iray. Ireo fampivoarana ara-teknolojika rehetra dia nampiarahina, afaka mahita loza lehibe isika. Ity teknôlôjia ity eo am-pelatanan'ny governemanta sy ireo ahiahy goavam-be no mamorona ny toerana ho an'ny fitondrana tsy refesi-mandidy amin'ny olombelona izay lazainao aminao. Raha vantany vao tafapetraka ny tamba-jotra, ny AI rehetra dia nosedraina tamin'ny robotics, ny fifandraisana atidoha dia tanteraka ary ny ADN ihany koa afaka miova amin'ny rahona, dia niafara tamin'ny toe-javatra tena mampidi-doza. Ny fanontaniana lehibe dia ny hoe afaka matoky ny governemanta sy orinasa toy ny Google sy Facebook isika mba hitokisana ity teknolojia ity. Ny fanontaniana lehibe kokoa dia ny hoe tokony tena maniry marina tokoa ve io fanovàna manjaka tsikelikely io? Ahoana no ahafahantsika manakana izany loza mampidi-doza izany? Sa tokony ho hitantsika ho toy ny dingana tsy azo ialàna amin'ny fivoaran'ny zanak'olombelona? Tadidinao ve ilay sarimihetsika etsy ambany? (Vakio eto ambany ny lahatsary)
Raha toa ny olona tahaka ny tale jeneralin'ny Ray Kurzweil (sy ny maro hafa), dia hanipika ny biôlôjia taloha isika ho an'ny 2045 ary hiaraka amin'ny AI. Tonga avy amin'ny teny mahafinaritra ho an'izany izy ary miantso ity fotoana fanangonana ity 'ny singa manokana'. Amin'izay fotoana izay, ny vatan'olombelona dia ho lasa tsy mety maty vokatry ny fivoaran'ny teknolojia voalaza etsy ambony. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Raha hametraka ny fisehoan-javatra rehetra, dia mety hahita fa ny tsy fahafatesana mikatsaka ny transhumanists (ny fiara hery ao ambadiky ny fivoarana ara-teknolojika rehetra ireo, izay any an-tampon'ny rehetra sosona ny teknolojia orinasa lehibe), dia manana Mitovitovy amin'ny faminaniana ara-pivavahana. Amin'izany fomba izany no ahafantarantsika ny 'tsy fahafatesana' amin'ny 'fiainana mandrakizay' avy ao amin'ny Baiboly. Ary rehefa voalaza eo amin'ny Baiboly momba ny famoronana ny "lanitra vaovao sy tany vaovao, afaka nataony tao amin'ny virtoaly izay zava-misy ao amin'ny Ray Kurzweil dia maminavina fa afaka miaina any 2045. Manoro anareo aho araka izany ity lahatsoratra ity mamaky indray. Eto aho dia manazava ny antony mahatonga ny teknolojia hamoaka ny faminaniana ara-paminaniana rehetra, anisan'izany ny endriky ny tarehimarika Messiah any an-danitra (ny rahona). Ny rohy miaraka amin'ny transgenderism (olona tsy manambady) dia mihamazava kokoa, araka ny hazavaina ao ity lahatsoratra ity.
Raha ampifandraisinao ireo ampahany ireo ny piozila, dia mety ho tsapanao fa efa tapitra ny fotoana fanavotana. Ny revolisiona dia tsy maintsy manomboka izao. Vakio àry ity lahatsoratra ity Ahoana no ahafahanao milalao anjara amin'izany? Zava-dehibe ihany koa ny hanesorana ny teknolojia izay miha-mitombo hatrany ny tranonkala manerantany. Hitanao ve ny loza? Zarao ity lahatsoratra ity araka izay azonao atao!
Ho an'ny fahatsapana tsara dia ilaina ny mahitsy tsikelikely amin'ny lahatsoratra mifandraika sy mamaky azy ireo. Vakio here the sequel.
Lisitry ny rohy loharano: oneweb.world, edgy.app, technocracy.news, cloudminds.com, spectrum.ieee.org, futurism.com
Ny Transhumanisma, inona izany ary nahoana no mampidi-doza izany ankehitriny?
Vidio ny kitapo CRISPR anao manokana ankehitriny mba hampifanaraka ny ADN anao ary ho lasa bio-hacker
Ny ADN teo amin'ny akanjon'i Anne Faber dia nitondra an'i Michael Panhuis, saingy tara loatra!
Tags: 5G, cyborg, cyborgs, Elon, Featured, Musk, Network, tambajotra, robot, toerana, zanabolana, zanabolana, Space X, transhuman, transhumanisering
28 Febroary 2019 ao amin'ny 17: 51
Fivoaran-draharaha vao haingana in machine2machine Nahazo tosika koa, inona no mahalala vitsy dia Qualcomm, ny orinasa ao ambadiky ny fivoaran-draharaha ao 5G (Jereo koa ny 4G, 3G, 2G) ny any dingana izay nomerika am-ponja na araka izay miantso azy hahatonga * Smart Gulag *
"Amin'ireo teknolojia novolavolain'ny QualComm Israel dia ny m2m (môtô amin'ny milina) sehatra finday, izay mpitondra teny. Izany Anisan'ny Qualcomm ny ezaka mba hamorona ny "Internet ny zava-drehetra," izay zavatra ireo pahendrena mifandray amin'ny alalan'ny fitambaran'ny nandroso Wireless tambajotra, Modules, Sela Mpandray Hafanana sy ny rindrambaiko mba hahafahan'ny ny tena-ny fotoana fifanakalozan-torohay - amin'ny fototra singa nitranga in Qualcomm ny Haifa toerana , hoy ilay orinasa. Tagg, ny fitaovana fitsaboana biby isan-karazany, dia anisan'ireo vokatra azo avy amin'ny teknolojia. "
"Anatin'ireo fandraisana anjara mendrika an'ny QualComm ho an'ny teknolojia finday dia ny fampandrosoana ny CDMA (Code Division Multiple Access) standard, izay nanamora ny fomba hampiasana ny fifandraisana 3G sy 4G. Ny ekipa Israeliana dia nanampy tamin'ny fampivelarana ny fenitra ho an'ireo teknolojia, hoy i Jacobs. "
Na dia fantatra amin'ny zavatra maro aza i Microsoft, dia fantatra ho an'ny Windows - ary nandritra ny taona maro, dia nivadika ny tsaho nandritra ny taona maro izay noforonina tao Israely. Windows no "israeliana." Tsy fantatra ny gates, izay tsy fantany, fa izy kosa dia "faly be"
Ny fitaovana fitsikilovana Tagg cap (goyim) 😀 ary ny ampahany lehibe amin'i Windows dia manamboatra ny matematika ao Israely ... 😉
6 Martsa 2019 ao amin'ny 17: 28
6 Martsa 2019 ao amin'ny 22: 30
28 Febroary 2019 ao amin'ny 18: 00
Talohan'ny milina no tsy maintsy aloha ny ontiegelijk mitombo be dia be ny antonta-kevitra mba hitsapana ny algorithms ny fomba fankasitrahana, Microsoft / Apple / Google hanao izany, sy ny antontan-kevitra lehibe dia ny teny majika ....
28 Febroary 2019 ao amin'ny 18: 15
oh yes no 5G any Israely
1 Martsa 2019 ao amin'ny 15: 05
ZiB, tsy misy 5G ao Israely, azonao antoka ve?
ff 10 minitra googling ao amin'ny "5G rezo Israel" dia manome sary hafa (manandrama fotsiny)
Karazana olona manao ahoana no lazainy fa tsy mahazo 5G ny Isiraely? Inona no fototr'izany?
Iza no mizara ity disinformation ity? Afo mandevona ary avy eo ny "ondry"? Tahaka izany.
28 Febroary 2019 ao amin'ny 18: 32
Eny, ary ny vahoaka dia toa manao tsara ary tsy manao na inona na inona momba ireo fivoaran-javatra ireo. Fantatray hoe iza no ao ambadik'izany, saingy eny, jadona mangina, tsy misy dikany iainantsika raha tsy izany ireo olona ireo no tompon'andraikitra amin'izany. Mampalahelo, noho izany.
Eny tokoa, marina tokoa ny marinatellers fa tsy tsara akory ny fiovana revolisiona. Tsy manao an'izany koa aho, fa tsy mieritreritra aho hoe hiditra amin'ny sehatra ny vahoaka. Izany no ho sitrapon'ireo vahoaka izay eo ambany fahefan'ny governemanta. Ah, Holander, ny zana-kisoa dia tsy mitranga mihitsy raha tsy ampiharina amin'ny voampanga.
28 Febroary 2019 ao amin'ny 18: 35
Mivezivezy amin'ny làlan-diso. Tokony hijanona ireo fivoarana ireo. Na ahoana na ahoana, ny tsy ilaina dia tsy ho afaka hiaina mandrakizay. Ireo dia tena hiangona amin'ny ambaratonga mahery (ara-batana).
1 Martsa 2019 ao amin'ny 14: 23
Tena tsara rehetra, fa rehefa hitako ny shills ihany izay mety hanampy hampiharana ny chemtrails, vavahady ny pizza, sy ny hafa 911 TIG Psy-Ops / hoaxes sy ny rakotra fanaovam-panavotana dehibe, inona no Mila 5G tambajotra?
Tsy mahafantatra na inona na inona isika, ary izany no antony (?) Hitsambikina toy ny ondry ihany isika.
Mandeha toy ny mahazatra hatrany izany. Ary avy eo namaky ny fanehoan-kevitra aho teo ambanin'ny lahatsary tao amin'ny YT ary avy eo:
"Manontany tena hoe nahoana ny Isiraely dia tsy manongotra ny tambajotra 5G"
Ary toa toa lainga indray izany.
Ary mandray an'io fiainana mandrakizay miaraka amin'ny sira io aho, raha ny marina, tsy mino an'izany aho.
Tokony ho azo atao ny mangirifiry na ny ho faty mosary.
1 Martsa 2019 ao amin'ny 21: 14
Izany shills izany fahamarinana izany amin'ny farany misy dikany Mix mba nitsoka ny sambo-fiarovana harato, dia tokony ho mazava ... ohatra betsaka (George Van Houts, Ronald Bernard, Ole Dammergard, Jim Fetzer, sy ny sisa).
Tsy midika anefa izany fa ny teknolojia dia tsy mitombo amin'izany fitarihana izany. Tena mora ny mampitombo ny tenanao amin'izay soratro ary hitako fa tsy miresaka momba ny tantara fiction, fa momba ny siansa / ara-barotra marina
Ny zavatra ataonao (fandroahana zaza iray miaraka amin'ny rano fandroana) dia ny fihetseham-po marina izay tsy maintsy notanterahin'ireto vorona ireto.
1 Martsa 2019 ao amin'ny 10: 55
Ny zavatra voalaza eto dia tohanan'ny loharano maromaro ...
Indray lozam-pifamoivoizana, indroa fifandrifian-javatra ary intelo in-telo
1 Martsa 2019 ao amin'ny 17: 51
Riffian, indrindra fa ny 27 minitra voalohany azoko natao, saingy very ny kofehy avy amin'ny 27 minitra: 12 mankany 28: 31. Ho ahy anie. Efa nahita an'izany ve ianao?
Tsy azoko hoe inona ny olany, sa sambatra izy ireo? Tena tsy takatro mihitsy. Sa olon-doza an-tsokosoko mihatra amin'ny Kristianina? (Toy izany koa ny lanezy)
Tena mahazatra any amin'ny toerana hafa ny fijoroana vavolombelona ataon'ny kristiana sandoka izay manakana ny ondry kristianina hifehy ny mofomamy toy ny fahatongavan'ny Mpamonjy amin'ny endrik'i Jesoa Kristy.
Raha ny momba ahy manokana, ny trunews dia fantsom-pahitalavitra hosoka tokony horaisin'ny Kristianina.
2 Martsa 2019 ao amin'ny 11: 15
Izany no fototry ny fototry ny teknolojia mitarika mankany amin'ny fonja amin'ny ho avy izay ataony ankehitriny. Azonao atao ihany koa ny mihaino ilay version madio
2 Martsa 2019 ao amin'ny 06: 32
Tena mahaliana ny zavatra hitranga. Na izany aza, heveriko fa efa nitranga teo aloha izany ary raha ny asan'ny olombelona dia miakatra ambony ka mitovy amin'ny andriamanin'ity izao tontolo izao, dia hiverina ny zava-drehetra. Ny ankamaroany dia lavitra lavitra ny tenany ka tsy manana fahalalana hitranga fotsiny izy ireo.
Mieritreritra ianao fa mahita ity tontolo ity amin'ny alalan'ny solomaso mavokely izay efa nananantsika rehetra. Raha tsy namolavola ny tenanao ianao ary tsy nampiasa ny fomba fiasan'ity zava-misy ity. Avy eo dia lasa mangatsiaka be ny tafontranonao, satria tena mandeha haingana tokoa ny taona farany sy ny taona ho avy.
Ny vatan'i Noa dia tsy misy afa-tsy vatam-paty iray, ny fiara ihany koa dia mitovy amin'ny vatam-paty. Aza miditra ao amin'ny tantaram-piainana mandrakizay eto amin'ity planeta ity, fa aoka ho fantatrareo fa eto ianao no mamela ny ratsy hiverina. Ny mifanohitra amin'ny ratsy dia tsy miaina akory. Raha mifandray amin'ny aterineto ianao dia tsy miaina ary ratsy izany. Amin'ny alàlan'ny fahafatesana dia afaka miala eto ianao, tsy matahotra azy amin'ny tsy misy. Tsy misy famonoan-tena satria ianao dia hiarina indray hikiakiaka indray dia mitazam-panafody na tsy ela ao amin'ny cyborg.
Tsy afaka mandà isika fa tsy mila Internet ho an'ny fampandrosoana, fa efa lavitra ny sisintany.
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe iza no nanao ireo petroglyphs ireo? Angamba izy ireo no sisa velona tamin'ny famerenana teo aloha.
Angamba manomboka mampiasa vatokely vato sy tsipìka sy zana-tsipìka
Handeha hiaina izany isika na hizara izany fa mbola hihaona aminy indray isika.
2 Martsa 2019 ao amin'ny 14: 30
... mamolavola amin'ny Qualcomm / 5G
Cristiano Amon, lehilahy ambony ao amin'ny Qualcomm, dia manampy fa ny 5G dia mahatonga horonam-peo 4K ho mora tahaka ny mozika mivantana. Oh ny fanao 😀
Ny zava-drehetra ao anaty rahona
5G tsy maintsy ho tena zava-dehibe ny fahaiza-manao rahona. "Tsy ela no mitahiry ny zava-drehetra eo amin'ny rahona", hoy Qualcomm Amona. "Ary mbola maro fampiharana eo amin'ny smartphone, tamin'ny farany ny zava-drehetra ho hitanao eo amin'ny rahona sy ny samy hafa eo amin'ny telefaonina fampiharana tsy ilaina." By dia midika fa ny fanazavana dia voatahiry ao amin'ny rahona, fa tsy ara-batana amin'ny finday.
toy izany koa ao amin'ny Microsoft hitantsika ny 365 Drive rahona vahaolana iray sy Google..De sy voafintina dia angon-drakitra azo ampiasaina rehetra maneran-tany amin'ny indray mipi-maso sy ny fampiasana atsangana hitondra computing dia taty aoriana tapa-mofomamy ...
ary mazava ho azy miaraka amin'ny algorithm tsara fa misy zavatra azo sakanana amin'ny fotoana 😉
11 June 2019 ao amin'ny 17: 27
Addalom dia novidina avy amin'ny Microsoft - Azure Servers dia hitazona ny angon-drakitra fa ny programa Assaf Rappaports (Addalom) dia hiaro ireo serveurs sy ny teboka farany. Manana Addalom VPN ianao ary manangona ny data amin'ny alàlan'ny serverany alohan'ny hamelezana ireo serveurs lehibe na Microsoft. Manontany tena aho hoe aiza ho aiza ireo serveurs ireo? Mifantoka amin'ny foibe? Na dia zaraina manerana izao tontolo izao aza izy ireo dia tsy maintsy ampidirina any Israely izay misy ny foiben'ny fiarovana Microsoft.
Ny anarana Microsoft dia manondro an'i Assaf Rappaport lohan'ny Isiraely F & D
Rappaport dia nianatra fizik, matematika ary siansa momba ny informatika tao amin'ny Anjerimanontolon'i Hebreo tao Jerosalema, ary nahazo mari-pahaizana faharoa amin'ny sehatry ny informatika avy amin'ny Teknika - Israel Institute of Technology. Izy dia nanompo tao amin'ny IDF 8200 sehatra intelligence nandritra ny enin-taona, ary avy eo niasa ho an'ny mpanolo-tsaina McKinsey tany Aostralia. Nanorina an'i Adallom niaraka tamin'i Ami Luttwak sy Roy Reznik izy, namana roa avy ao amin'ny vondrona 8200.
2 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 43
Israeliana fikarohana fanadihadiana iraisam-pirenena mampiseho ny fihaonambe io ihany herinaratra peo ampiasaina amin'ny fitaovam-piadiana ho an'ny fanaraha-maso ny vahoaka, mamorona ny fototry ny farany 5G Network, mihoatra ny arivo tapitrisa 50 fitaovana mampiray (IoT). Ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao mba hanamafy Wireless peo ao amin'ny milimetatra sy ny onjan-drano submillimeterbereik fa ireo mifandray mivantana amin'ny olona hoditra, indrindra ny fihary hatsembohana. Dr. Ben-Ishai Department of Fizika, Hebreo University, Israel vao haingana nanazava ny fomba hatsembohana fantsona olombelona hanao ny asan'ny andianà helical tandrok'ilay amin'ny hatsiaka ireo onjam-.
Nampitandrina ny mpahay siansa fa talohan'ny 5G Naparitaka teknolojia mampiasa ireo peo, voalohany fandinihana ny fiantraikan'ny dia tokony ho tanterahina ho an'ny fahasalaman'ny olombelona mba hahazoana antoka ny vahoaka sy ny tontolo iainana no voaaro.
Nisy fampianarana ve? Ehhh no 😀
2 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 46
Inona moa ny filantrophists, huh? Noho izany dia be atao amin'ny maha-zava-dehibe ny maha-olombelona. Ary izahay dia henjana sy manakiana. Mahazo kofehy izy ireo. Olona manokana ihany izany. Kuch.
Miovaova ny fitondrana!
3 Martsa 2019 ao amin'ny 08: 35
Manadino foana ny marina izy io. Na ahoana na ahoana, dia maro ny Space X no hosoka, anisan'izany ny mionona amin'ny olona rehetra.
3 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 18
Ny hany zavatra Hitako avy amin'ireo fivoarana ara-teknolojika na ny vinavina fandaharana izay hitantsika amin'ny alalan'ny fantsona ny mahazatra, dia eritrereto ny Black Mirror amin'ny Netflix dia ny foto-drafitrasa ho an'ny 'Sesame Sary nahazoan' rafitra mampiasa IoT (5G) farany dingana lehibe mandeha. Manangana io hevitra io isika rehetra, miaraka amin'ny alalan'ny asa ao amin'ny Internet ny bibi-dia rafitra ny hoavy, noho izany aho, tonga any amin'ny famaranana fa tsy te ho mpiandry ny biby AI ka noho izany tsy hiditra ny hoavy ivelan'ny aterineto / eny Grid. Inona no Zib sy Martin lahatsoratra eto dia tsy ho avy mozika hitranga rehefa miteny ..
3 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 23
Antsoy hoe inona no tadiavinao, Manan-kery izy io dia midina mankany amin'ny iray ...
4 Martsa 2019 ao amin'ny 13: 22
Ahoana raha ity Microsoft Hololens vaovao ity no fanombohana fotsiny? Ao anatin'ny taona vitsivitsy, ireo sary dia hampidirina mivantana ao amin'ny atidoha ary ny tambajotra 5G dia ho lasa zava-dehibe. Raha toa ka miezaka ny hitsangatsangan'ny Google ao amin'ny tontolon'ny Google izao tontolo izao dia lasa "sexy" kokoa izany! Fa iza no mitantana ny tambajotra? Ny tranonkala manerantany? Iza ilay arina eo afovoany?
4 Martsa 2019 ao amin'ny 15: 44
Iza no mitantana ny tambazotra? Iza ilay arina eo afovoan-dry zareo. Tsy sarotra ny mamaly. Iza izao no mitantana ny angon-drakitra sy ny vaovao? Marina, ahiahy mahazatra. Iza no. Cui bono ny làlana rehetra mitondra mankany amin'izy ireo.
4 Martsa 2019 ao amin'ny 19: 02
Akamai Technologies, Inc. dia afa-po Amerikana fanaterana Network (CDN) sy ny rahona mpanome tolotra ny foibeny any Cambridge, Massachusetts, any Etazonia. Akamai ny votoaty fanaterana Network dia iray amin'ireo amin'izao tontolo izao sary lehibe indrindra nizara computing sehatra, tompon'andraikitra amin'ny fanompoana eo 15% sy 30% rehetra vohikala fifamoivoizana.  ny orinasa fiasan'ny tambajotra ny lohamilina manerana izao tontolo izao, ary rents avy fahafahana amin'ny thesis lohamilina ny mpanjifa izay noho ny Internet hiasa haingana kokoa amin'ny alalan'ny fizarana afa-po amin'ny toerana akaiky ny mpampiasa. Raha misy mpampiasa navigates ny URL iray Akamai mpanjifa, ny navigateur dia niova ny iray amin'ireo Akamai ny dika mitovy ny vohikala.
4 Martsa 2019 ao amin'ny 22: 37
Mahaliana ... izaho dia mpitantana varotra tao AboveNet (ankehitriny Akamai ankehitriny).
Ny tena ilaina: VP Paul A. nandroaka Porsche 911 ary nametraka foana ny efitrano 911 tao amin'ny hotely lehibe kokoa
Nisotro labiera betsaka izahay tamin 'ny fotoanan'ny 911, saingy natao ho an'ny fanafihana malaza PsyOp
Abovenet dia nahazo ny Metromedia Fibernetwork (Nasdaq MMF), saingy nanjary bankirompitra tao amin'ny 2002 (https://www.nytimes.com/2002/05/21/business/technology-metromedia-fiber-files-for-bankruptcy.html)
Taty aoriana izy ireo dia nanomboka tamin'ny Akamaï (na nividy azy noho ny bankirompitra) taorian'ny nividianana ny habaka Sitemith vola be. Tamin'io fotoana io aho dia nandao ilay sambo nilentika tamin'ny mpifaninana iray (izay nitehaka ihany koa taorian'ny bala tamin'ny telefaona).
Raha fantatro izao fa tena niasa ho an'i Rupert Murdoch aho, dia nokapokapohako teo an-tsofiko, saingy tsy izany no nataoko tamin'io fotoana io.
5 Martsa 2019 ao amin'ny 17: 30
Misaotra an'i Martin noho izany vaovao mahaliana izany. Izaho dia mandeha lavitra kokoa amin'ny filazàna fa Akamai dia anisan'ny fandaharan'asa Israeliana Talpiot malaza izay i Danny Lewin dia efa vokatra, ny Unit 8200 dia mitovy amin'ny American NSA. Tsy i Murdoch ihany noho ny lehilahy zatoista iray.
11 June 2019 ao amin'ny 12: 10
Ny ampahany amin'ny Danny Lewin (Akamai) dia tena mahaliana, 9 / 11 dia fiasa ara-tafika Israeliana tsy misy fisalasalana.
16 June 2019 ao amin'ny 16: 57
@zib, tena mahaliana fa tandindona i danny. Nambarako matetika izany raha mihady lalindalina kokoa ianao dia ho tonga amin'ireo olona ahiahiana mahazatra. Miafina ao ambadiky ny karazana masony izy ireo ary tia miasa ao anaty maizina, toy ny rambony. Raha vao miantsoana azy ireo ny marina (marina), dia mandositra any amin'ny faritra rehetra izy ireo ...
5 Martsa 2019 ao amin'ny 17: 46
Isiraely no The 2nd Eye Out Of 6-maso.
5 Martsa 2019 ao amin'ny 19: 16
Ny andraikitry ny orinasa israeli isan-karazany (orinasa any aloha) amin'ny asa fampihorohoroana toy ny 9 / 11, 7 / 7 etc.
6 Martsa 2019 ao amin'ny 15: 32
6 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 13
8 Aprily 2019 ao amin'ny 23: 31
Voalaza matetika fa eto amin'ity tranokala ity, mamintina ny famantaranandro ... farany dia mifoha amin'ny faritra (taloha) ry zareo
9 Aprily 2019 ao amin'ny 15: 25
Ah Abma, fotoana tokony hitazonana azy ireo ho any Blockama any Atsibe fa tsy Zwarte Piet
11 Aprily 2019 ao amin'ny 15: 59
« Nanomboka ny revolisiona!
Microsoft Hololens 2 mamy izay mety amin'ny aterineto »
Total visits: 12.933.824